China Monkey mampiseho fampisehoana, orinasa vita amin'ny mazoto ary mpamatsy | Gepair mesh
Ny gidro mampiseho vatan-dramatoa, ny tonelina mesh
Ny rafitry ny Exhibit Tunnel dia ahitana ny tariby tariby vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny tanana izay tohanan'ny boribory boribory matevina mba hamoronana endrika terelina. Izy io dia foto-kevitra vaovao feno fanavaozana iray ahafahana mijery ny mpitsidika zoo raha mamorona toerana azo antoka kokoa.
Ny valibesin-tariby tariby tsy misy volo dia manana toetra maro, ka tonga lafatra ho an'ny valandran'ny gidro, mety ho an'ny gidro lehibe sy antonony sy kely, izay nampiharina mesh enclosure mesh, fampirantiana rajakozy, rajako mony, valizy fencing, monkey barrier netting.
Ny harato monkey dia vita amin'ny vy matevina ary mihodina amin'ny tady vita amin'ny vy vy. Ity harato tariby ahafahana mivalona sy elastika ary afaka mamorona endrika fantsona eo ambanin'ny tohanan'ny peratra vy boribory.
Fanamboarana tonelina vy vita amin'ny vy, vatan-drongony matetika no ampiasaina amin'ny karazan-gidro, indrindra fa ny primate sy ny gidro. Ny halavam-bolan'ny tonelina dia amin'ny ankapobeny tokony ho 75 sm, ary ny halaviran'ny peratra metaly amin'ny ankapobeny dia 200 cm. Ny mombamomba ny vokatra matetika ampiasain'ny Monkey Tunnel Mesh dia GP1651, GP2051 GP2476, sns. Ary ny mombamomba ny vokatra ampiasain'ny Tiger Tunnel Mesh dia GP3251, GP3276, sns.
Previous: Alumni rojo vy vy
Manaraka: Z-vy vita amin'ny vy stainless vy fantsom-bolo mesh conveyor fehikibo
Ny rajako fampiratiana mesh
Ny tariby vita amin'ny vy vy azo tanterahina (Inte ...
Handrana tariby matevina manondraka
Vatosoa vita amin'ny vy vorona tsy azo tanterahina